🥇 ▷ Tijaabada shabakadda: Telefannada casriga ah ee qaaliga ah waxay keenaan soo-dejin sare - OnePlus 7 Pro waa hogaamiyaha Jarmalka ✅
Tijaabada shabakadda: Telefannada casriga ah ee qaaliga ah waxay keenaan soo-dejin sare – OnePlus 7 Pro waa hogaamiyaha Jarmalka
Soosaaraha taleefanka gacanta ee App OpenSignal wuxuu xisaabiyey in khaas ahaan taleefannada qaaliga ah ay sidoo kale ku wanaagsan yihiin heerka xogta. Natiijadan ayaa ka muuqatay dhammaan saddexda shabakadood.
Qiimaha taleefanka casriga ah wuxuu saameeyaa tayada isticmaalka internetka ee mobilada. Tani waxay ahayd natiijada falanqaynta barnaamijka ‘Openignal’ ee Jarmalka, kaas oo la soo gudbiyey Sebtember 9, 2019. Iyada oo ku xidhan sii deynta iyo CAT, LTE waxay bixisaa qiimeynta xogta oo ka duwan kan loo baahan yahay iyo casriga casriga ah ee loo baahan yahay in la taageero. Qeybta 19 LTE, tusaale ahaan, marka loo fiiriyo heerka chip soo saaraha ee ‘Qualcomm data’ oo gaaraya ilaa 1.6 GB / s, marka 4xMIMO iyo 256 QAM la isticmaalo.
Qalabka dhamaadka-sare, OnePlus Apple iyo Google
Si loo falanqeeyo kala duwanaanshaha, Openignal wuxuu ku dhawaaqay dadka isticmaala taleefanka casriga ah seddex koox – Low, Mid iyo High Tier – oo ku saleysan awoodaha taleefanka gacanta. Waxa halkan ka maqan, si kastaba ha ahaatee, waa fidinta LTE ee kaladuwan ee shabakadaha mobilada ee Jarmalka. Waxa kale oo jira qandaraasyo LTE ah oo xaddidan xaddiga xogta.
Tijaabada taleefannada casriga ah ee noocyada kala duwan ee qiimaha ayaa muujinaya taleefannada mobilada degdegga ah ee shabakadda 4G ee Jarmalka. | (c) calaamad furan
Isticmaalayaasha taleefannada casriga ah ee heer sare leh aaladaha lagu qiimeeyo ilaa $ 1000 iyo in ka badan ayaa la yimid OnePlus, aaladda Apple iyo Google ee heerarka ugu sareeya xogta. Faraqa u dhexeeyana mararka qaar waa mid tixgelin mudan. Tusaale ahaan, oo leh moodada ugu sarreysa ee OnePlus OnePlus 7 Pro, xawaaraha wax soo dejintu waxay ku dhowdahay labanlaab sida aaladda (aad uga jaban) aaladda LG (qiyaastii 19 MBit / s) oo celcelis ahaan qiyaastii ah. 40 Mbit daqiiqaddii.
Furitaanka furitaanka waxaa lagu daray oo keliya 2018 ee la daabacay iPhones Xs iyo Xs Max qeybtaan. Moodeellada imanaya sanadkan waa inay dhammaantood soo bandhigaan qiimayaasha Gigabit oo leh LTE Nooca 16 iyo in ka badan. Labada soosaarayaasha kale ee waaweyn ee taleefanka gacanta – Samsung iyo Huawei – aad ayey isugu dhowaayeen heerka xogta laakiin ma ahayn kuwa ugu sareeya.
Bartamihii-heerkii hore, taleefannada casriga ah ee HTC iyo Google ayaa wada joogay ugu sareeya. Nokia iyo Samsung ayaa daba socday waxyar kadib. Qeybtaani waxay ka kooban tahay inta badan moodooyinka iPhone, laakiin Apple waxay ku wada jiraan Sony, LG, OnePlus iyo Cat qadka dhexe. Suuqyada casriga ah ee Shiinaha Huawei iyo Xiaomi waxay lahaayeen marka loo eego cabbiraadaha isticmaalaha, xawaaraha ugu deg degga ah.
Qalabka casriga ah ee ay hogaaminayaan telefoonada gacanta ee ZTE iyo Sony. Isticmaalayaasha Samsung waxay heleen heerar deg deg ah oo wanaagsan, laakiin kuma jirin hoggaanka, oo aan ahayn Apple, Huawei iyo Cat waxay lamid ahaayeen.
Inbadan oo kusaabsan: LTE, 5G
Xigasho: Golem, Openignal